Dowladda oo ka digtay duufaano iyo Roobab laga cabsi qabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo ka digtay duufaano iyo Roobab laga cabsi qabo
Dowladda Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa heegan buuxa galisay, kooxaha ka shaqeeya gurmadka deg degga iyo talisyada ciidanka booliska, iyadoo cabsi laga qabo roobab mahiigaan ah oo dabeylo wata inay ka da’aan dalka.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladu ka digeyso fatahaado horleh oo ka dhaca Soomaaliya,iyada oo la cabsi qabo inay da’aan roobab xoog leh.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda ay heegan buuxa gelisay Hay’adaha qaabilsan Gurmadka deg dega iyo ka jawaabista xaaladaha deg dega ah ee ka dhalan kara Roobabka.
Xisbiga Sheekh Shariif oo sameeyay fal ay ku eedeyn jireen madaxda dowladda